Ego ijeri $ 90 dị ọnụ ala: ụzọ ụgbọ oloko na -akwa nhụjuanya ụgbọ mmiri okpuru mmiri French egwu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ego ijeri $ 90 dị ọnụ ala: ụzọ ụgbọ oloko na -akwa nhụjuanya ụgbọ mmiri okpuru mmiri French egwu
Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA
N'ọmarịcha ihe egwu, ụzọ ụgbọ oloko na-egwu ala maka ọnụ ahịa okpuru mmiri okpuru mmiri Australia na France, tupu Canberra kwadoro ịkwado ụgbọ okpuru mmiri nuklia nke United States na-akwado.
Ọstrelia kagburu nkwekọrịta S-90 ijeri ụgbọ mmiri okpuru mmiri na France iji kwado nkwekọrịta ọzọ na USA.
France chetara ndị nnọchi anya ya si Australia na US na Fraịde maka nzaghachi maka ihe ọ kọwara dị ka "omume na -adịghị anabata n'etiti ndị mmekọ na ndị mmekọ".
Ụzọ ụgbọ oloko turu ọnụ na ọ nwere ụtụ "anaghị akwado nuklia" nke “ijeri $ 90 dị ọnụ ala”.
N'iji mkparị na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri okpuru mmiri French na Australia n'izu a, ihe ọjọọ ngwa ngwa US subway wepụtara mgbasa ozi mkparị maka sandwiches ya, na-anya isi na ọ nwere ụtụ "enweghị ike nuklia" nke bụ "ijeri $ 90 dị ọnụ ala".
Mkpebi Australia ịkagbu iwu ijikọ ụgbọ mmiri okpuru mmiri okpuru mmiri nke US $ 90 ijeri na US kpaliri ibe zuru ezu ụzọ ụgbọ oloko mgbasa ozi ebipụtara n'akwụkwọ akụkọ The Age taa, na-egwu ego dị oke ọnụ nke nkwekọrịta okpuru mmiri okpuru mmiri Australia na France, tupu Canberra kwadoro ịkwado ụgbọ okpuru mmiri nuklia sitere na United States.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọrụ mgbasa ozi na -elekọta mmadụ hụrụ mgbasa ozi a dị nkọ na ihe ọchị, ndị ọzọ hụrụ na ọ bụ "ihe arụ" na enweghị nkwanye ùgwù.
Ọbụna onye ọrụ ebubo ụzọ ụgbọ olokoMgbasa mgbasa ozi nke “na -enupụ isi” nke “iji echiche nke oke ọnwụ na -ere nri,” na -atụle otú agha China, Australia na US si yie.
France chetara onye nnọchi anya yas sitere na Australia na US na Fraịde na nzaghachi maka ihe ọ kọwara dị ka "omume na -adịghị anabata n'etiti ndị mmekọ na ndị mmekọ" n'ihi nkwekọrịta AUKUS (Australia, United Kingdom, United States).
A kọrọ na onye isi ala France Emmanuel Macron gwara ya mkpebi Australia ịpụ na nkwekọrịta okpuru mmiri okpuru mmiri nke mba abụọ ahụ na 2016 ozugbo tupu akụkọ ahụ apụta n'ihu ọha.
Jean-Yves Le Drian, onye minista mba ofesi France kpọrọ mkpebi a “dọnye ya n’azu, ”Na-adọ aka na ntị na" nsonaazụ ya na-emetụta echiche anyị nwere maka njikọ aka anyị, mmekọrịta anyị na mkpa Indo-Pacific maka Europe. "
Ọstrelia ziri ezi na ọpụpụ ya na nkwekọrịta France na -ekwu na ọnụ ahịa ya adịla elu karịa ka a tụrụ anya ya.